Karan Johar oo jawaab lama filaan ah siiyay qof ku caayay filimkii Netflix - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
November 30, 2020 at 19:09 Karan Johar oo jawaab lama filaan ah siiyay qof ku caayay filimkii Netflix2020-11-30T19:09:07+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Filim soo saaraha caanka ah ee shirkadda Bollywoodka Hindiya, Karan Johar, ayaa u jawaabay qof ku tilmaamay “xaaska ugu fiican” ee barnaamijka cusub ee shirkadda Netflix, (Fabulous Lives of Bollywood Wives).
Filimkaas oo uu soo saaray Karan ayaa ku saabsan nolosha dhabta ah ee xaasaska atariishooyinka ah ee Bollywood-ka.
Qof ka mid ah dadkii daawaday qeybtii ugu horreysay ee filimkaas ayaa barta Twitter-ka kusoo qoray in Mr Johar laftiisa uu yahay “xaaska ugu wanaagsan” ee barnaamijkaas ku jira.
“Waxay ila tahay inaan dhammaanteen isku raaci karno in Karan Johar uu yahay xaaska ugu wanaagsan ee ku jirta #FabulousLivesofBollywoodWives. #NetflixIndia,” ayuu soo qoray qofkaas.
Laakiin ninkan caanka ah ayaa si lama filaan ah uga fal celiyay aflagaaddaas, wuxuuna sheegay inay tahay wax lagu qoslo.
Bartiisa Twitterka oo uu kusoo lifaaqay Twitterkii lagu aflagaaddeeyay ayuu Johar kusoo qoray: “Arrintan way iga qoslisay. Qof dadka internet-ka uga careysiiya oo wax majaajilo ah sheegaya waa maadeysi fiican”.
Barnaamijka Netflix, oo xalaqadiisii ugu horreysay ay baxday Jumcadii, waxaa kasoo muuqday xaasaska jilayaasha ah ee lagu kala magacaabo Maheep Kapoor, Bhavna Panday, Neelam Kothari iyo Seema Khan.
Dumarkan waxay xaasas u yihiin jilayaasha kala ah Sanjay Kapoor, Chunky Pandey, Samir Soni iyo Sohail Khan.
Karan, oo qeyb ka ahaa soo saarista iyo diyaarinta ayaa sidoo kale kasoo muuqday filimka, waxaana lagu daawaday qeyb uu afartaas haweenka ah la jilayo iyagoo sheekeysanaya.
Karan Johar ayaa in dhawaaleba ka jaabsaday baraha bulshada, isagoo aan ka jawaabi jirin hadallo badan oo lagu weerarayay.
Wuxuu kaalmaha hore uga jiray jilayaasha iyo filim soo saareyaasha Bollywood-ka ee sida weyn eedeymaha aan sal iyo raadka lahayn loogu jeedin ayay kaddib dhimashadii Sushant Sign Rajput, oo ahaa jilaa soo kacayay.
Ma jirin wax caddeymo ah oo loo cuskanayay eedeymahaas, inkastoo wali ay socdaan baaritaanno ay wadaan booliska Hindiya.
« WARBIXIN: Kooxaha Ilaa Haatan Bilaa Guuldarada Ah 5-ta Horyaal Ee Ugu Waaweyn Yurub.
Jurgen Klopp Oo Loo Sheegay In Uu Ku Saxnaa In Uuna U Dhaqaaqin Saxiixa Timo Werner Lana Soo Saxiixday Diogo Jota. »